Horudhac: West Ham United vs Manchester United… (Rikoorka uu Ronaldo ka heysto Hammers iyo Bruno oo taariikh u dhigay ciyaartoyda Premier League) – Gool FM
(London) 19 Sebt 2021. Naadiga Manchester United ayaa kulan ciyaareed ka tirsan horyaalka Premier League la ciyaari doonto kooxda West Ham United iyadoo galabta ku booqaneysa magaalada London ee caasimadda England.
Kooxda Hammers ayaa halis weyn ugu jirta ciyaartan inay guuldarreysato maadaama uusan u ciyaareyn gool dhaliyahooda ugu sarreeya ee Michail Antonio kaasoo ganaax ku maqan, halka Cristiano Ronaldo uu u raacayo Red Devils safarkiisii ugu horreeyay ee horyaalka.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 04:00 Galabnimo xilliga Geeska Afrika.
West Ham ayaanan galabta heli doonin xiddigeeda ugu goolasha badan xilli ciyaareedkan ee Antonio kaasoo kulankan ku seegaya ganaax hal ciyaar ah kaddib markii uu qaatay casaan ku yimid labo calaamad oo digniin kulankii ay kooxdiisa barbarraha la gashay Southampton toddobaadkii hore.
Winston Reid ayaa ah xiddiga kaliya ee dhaawac kaga maqnaanaya naadiga London ka dhisan inkastoo laga yaabo macallinka inuu is baddelo ku sameeyo safkiisa kaddib guushii daba-yaaqadii asbuucii hore ay Europa League kaga gaareen Dinamo Zagreb.
Dhanka kale, Manchester United ayaa ka bad qabta dhaawacyo cusub waxaana kaliya ka maqnaan doona Edinson Cavani oo la filayo inuu maalmaha soo socda kusoo laabto tababarka kooxda, waxaana xusid mudan inuu geesta kale soo laabanayo ciyaartan xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee Scott McTominay kaddib markii uu kasoo kabsaday qaliin looga sameeyay gumaarka.
West Ham ayaa adkaatay kaliya toddobo ka mid ah 50 jeer oo ay Manchester United ku wajahday horyaalka Premier League iyadoo barbarro gashay 13 jeer, halka 30-ka kalena laga adkaaday.
Red Devils ayaa West Ham ka adkaan karta labo ciyaar oo ka tirsan Premier League kuwaasoo ay booqatay kaliya markii labaad iyadoo horraan saddex xiriir ah kusoo adkaatay garoonkaas kulammada horyaalka markaas oo lasoo af-jaray 2011.
Man United ayaa hal gool u jirta inay 100 oo Premier League ah ka dhaliso ciyaartan.
West Ham ayaa guuldarro la’aan ah iyadoo la ciyaaray afarta kulan ee ugu horreysa Premier League markii ugu horreysay tan iyo 1999.
Tan iyo safashadiisii ugu horreysay ee Michail Antonio sanadkii 2015, Hammers ayaa adkaatay 41% (41 boqolkiiba) ciyaaraha uu kusoo bilawday taasoo la micno ah inay kooxdiisa guul gaartay 56 ka mid ah 137 ciyaar ee uu ugu soo bilawday, marka uusan kusoo bilaabanna, waxay adkaatay 28% (28 boqolkiiba) oo ka dhigan 25 ka mid ah 90 kulan oo uusan safka koowaad kusoo bilaaban.
Antonio ayaa ka qayb qaatay afar gool iyo saddex caawin oo ka mid ah 10-ka gool ee ay West Ham ka dhalisay Premier League xilli ciyaareedkan.
Macallin David Moyes ayaa kaliya ka adkaaday Man United saddex ka mid ah 28 jeer oo uu ku wajahay Premier League isagoo barbarro helay toddobo jeer isla markaana la garaacay 18 kale, waxaana saddexda guul uu kaga gaaray garoonka Goodison Park isagoo macallin u ahaa naadiga Everton.
Manchester United ayaa guuldarro la’aan ah 28 kulan oo ay Premier League kusoo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda, waana rikoorkii guuldarro la’aan ee ugu dheeraa kulammada bannaanka taariikhda horyaalka Ingiriiska, waxaana 28-kaas kulan laga dhaliyay kaliya 19 gool iyadoo shabaqeeda difaacatay 13 ciyaar.
Waa markii labaad ee ay Man United guuldarro la’aan tahay afarta kulan ee ugu horreysa horyaalka 10-kii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay, waxayna isla 10 dhibcood heysatay heerkan oo kale sanadkii 2017.
Cristiano Ronaldo ayaa shan gool ka dhaliyay West Ham afar kulan oo uu kaga hor tagay horyaalka xilligiisii hore ee Red Devils.
Bruno Fernandes ayaa guuldarro la’aan ah 27 kulan oo uu Premier League kusoo ciyaaray bannaanka garoonka kooxdiisa, waana rikoor uu u dhigay dhammaan ciyaartoyda Premier League bilawga waayahooda horyaalka Ingiriiska.
Horudhac: Tottenham vs Chelsea... (Lix xiddig oo muhiim ah oo ka maqan Spurs xilli Son shaki la gelinayo & N'Golo Kante oo...)